နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဌာနချုပ်မှာ မေလ ၂ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ ပါတီလူငယ်တွေ့ဆုံပွဲကို တွေ့ရစဉ်
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှာ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်အဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအားလုံးကို အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်အတွင်း ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီအဖြစ် ကနေ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ပုံမှန်ကျင်းပတဲ့ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေး ကို နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ ပါတီဗဟိုဌာနချုပ်မှာ ဒီနေ့ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့စပြီး လာမယ့် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီရဲ့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီမှာပါတဲ့ ဝန်ကြီးတာဝန်ယူထားသူတွေကို ပါတီဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်တွေအဖြစ်ကနေ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ဒီနေ့ အစည်းအဝေးမှာ ချပြခဲ့တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
USDP ဥက္ကဌ ပါတီဝင် အမျိုးသမီးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံ
ရခိုင်ကိစ္စ အလျှော့မပေးဖို့ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဟောင်းပြော
ပါတီ ၂၉ ပါတီ ရခိုင်ကိစ္စ သတင်းစာရှင်းလင်း
အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ ပူပန်မှုကို အစိုးရ ဖြေရှင်း သင့်ကြောင်း USDP ပြော
အစိုးရသစ်ဟာ ဒီမိုကရေစီအာဏာ ရှင်စနစ်ကို ဦးတည်နေကြောင်း ကြံ့ခိုင်ဖံွ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဌပြော
USDP ထိပ် ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေ ပြောင်းလဲ
လွှတ်တော်မှာ ၂၅%၊ အစိုးရအဖွဲ့မှာ အဓိက၀န်ကြီးနေရာတွေ အပိုင်ယူထားရုံနဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် မလုံလောက်သေးဘူး….။
PR ဆိုပြီး နောက်ထပ်ခွဲတမ်း ထပ်နှိုက်ချင်ပါသေးတယ်…။ PR စနစ်ကျင့်သုံးရင် ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ ရှုပ်လေ..ကောင်းလေ..ဆိုသူတွေ အကြိုက်ပါ..။ နေရာနဲ့ အာဏာအတွက် ကြံ့ခိုင်ရေးက အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါ…။
Jun 24, 2013 03:56 PM
They are following the footsteps of "Ta- Sa-Nya" party. Going downhill. Army may formanew group.
Jun 23, 2013 03:10 PM
၂၀၁၅ မှာအပြောင်းအလဲ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အိုဘားမားကိုတောင် အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ လိမ်သွားနိုင်သေးတာဘဲ။ မြန်မာပြည်သူတွေလောက်က တော့ သနားတယ်။ ပညာကုန်မသုံးရသေးဘူး။ ကိုရွှေမန်း အရူးထတာတောင် တစ်ချက်ဘဲ ထောက်လိုက်တာ အသံတောင်မထွက်နိုင်ရှာတော့ဘူး။
Jun 23, 2013 02:59 AM
Constitution must redraw and it should not include special right for military or any one...everyone must have equal right... do not support silly and cruel Aung Thaung’s PR system idea anymore...
Otherwise, they ( Kyant Phoot) will crack down other parties by all means legally and illegally for their winning result.
There will do these ways as they did in the past several years.
Jun 23, 2013 02:47 AM
They like PR system now because they are not confident that they will win in the coming election.
Jun 22, 2013 08:38 PM